विपक्षीहरु कस्ता छन् ? | गठन र अध्ययन
विपक्षीहरु कस्ता छन् ?
माइट निक्यूसा | 26/11/2021 23:46 | विपक्षहरू
विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको लागि कलहरू छन्। प्रतिस्पर्धाहरू परीक्षाहरू माग गर्दैछन् जसको लागि उम्मेदवारहरू सचेत रूपमा तयारी गर्छन्। रिक्त पदहरूको संख्या सानो छ, तथापि, उम्मेद्वारहरूको स्तर उच्च हुन सक्छ। तिनीहरू सबै एउटै लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छन्। तर अवसरहरू सीमित छन्।
विपक्षी परीक्षासँग जोडिएका पदहरू सार्वजनिक प्रशासनको हिस्सा हुन्। प्रतिपक्ष विभिन्न परीक्षणहरूबाट बनेको हुन्छ जसले छनोट प्रक्रियालाई बनाउँछ जसको माध्यमबाट जिम्मेवारी लिनको लागि वस्तुगत योग्यताहरू छन्।
1 नयाँ प्रतिपक्षको आह्वान कहाँ पत्ता लगाउने
2 सम्पन्न परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?
नयाँ प्रतिपक्षको आह्वान कहाँ पत्ता लगाउने
कुन माध्यमबाट तपाईले नयाँ कलको बारेमा विवरणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? यस सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी पत्ता लगाउन नियमित रूपमा आधिकारिक राज्य राजपत्रमा परामर्श लिनुहोस्। प्रतिपक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन चाहनेले तोकिएको अवधिभित्र प्रक्रियालाई औपचारिकता दिनुपर्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। प्रतिपक्षको विकासलाई तीन फरक क्षेत्रमा बनाउन सकिन्छ। एकातिर, परीक्षा राज्य स्तरमा फ्रेम गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ क्षेत्रीय वा प्रादेशिक स्तरमा हुने कलहरू पनि छन्। तयारी प्रक्रिया यति माग छ त्यहाँ विशेष एकेडेमीहरू र पेशेवर प्रशिक्षकहरू छन् जसले उम्मेदवारहरूलाई साथ दिन्छन् अध्ययन योजना विकास गर्न। विपक्षीसँग माग गर्ने छनोट प्रक्रिया छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
तर यो औंल्याउनुपर्छ कि परीक्षणमा पहुँच आवश्यकताहरू छन्। यसरी, उम्मेदवारले कागजातमा देखा पर्ने बिन्दुहरूको पालना गर्नुपर्छ। कतिपयले उत्कृष्ट अंक हासिल गरेर निश्चित स्थान हासिल गर्ने सपना पूरा गर्छन्। जब त्यो हुन्छ, पेशेवरले आफ्नो दीर्घकालीन भविष्यलाई त्यो जागिर स्थितिसँग जोडिएको कल्पना गर्न सक्छ। अन्यथा, व्यक्तिले अर्को कलमा आफूलाई पुन: प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र, फेरि, वर्णित लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा संग सम्बन्धित परीक्षा लिनुहोस्।
प्रक्रियामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू आवश्यक तालिम, दक्षता र सीप भएका व्यक्तिहरू हुन्। प्रतिस्पर्धाहरूले समान अवसरहरूलाई बढावा दिन्छ किनभने तिनीहरू योग्यता र क्षमतालाई महत्त्व दिन्छन्। परीक्षणहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकसित हुन्छन् जस्तै, उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय। धेरै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक घटक भएका परीक्षाहरूको संयोजन देखाउँछन्। उदाहरणका लागि, परीक्षणको रूपमा मूल्याङ्कन सामान्य छ। मौखिक परीक्षा पनि गर्न सकिन्छ।
सम्पन्न परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?
जसले विपक्षीलाई पास गर्न अध्ययनको लक्ष्य राख्छ, दैनिक काममा प्रतिबद्ध हुन्छ। एक अध्ययन तालिका विकास गर्नुहोस् जसले उच्च स्तरको समर्पण देखाउँदछ जुन परियोजनाको तयारीमा आवश्यक छ।
विपक्षीहरू सार्वजनिक छन्। अर्कोतर्फ, प्रक्रिया सुरु गर्ने उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्छन्। यो एकदम फरक परिस्थिति संग मान्छे द्वारा बनाईएको छनोट हो। उदाहरणका लागि, केही विरोधीहरूले आफ्नो पूरा समय परीक्षाको तयारीमा खर्च गर्छन्। अरू, यसको विपरीत, तिनीहरूको कामसँग अध्ययन मिलाउन। कोही-कोही युवाहरूले आफूले बताएको लक्ष्य राख्छन्‌। अन्य अवस्थामा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूले अनुभवी पेशेवरहरूको लागि नयाँ अवसर प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हामीले पहिले नै संकेत गरे जस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूले वस्तुगत योग्यताहरूलाई महत्त्व दिन्छ एक व्यक्ति को। तिनीहरू ती लक्ष्यहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो व्यावसायिक र शैक्षिक जीवनभर हासिल गर्नुभएको छ। यस कारणको लागि, त्यहाँ एक सक्षम अधिकारी छ जसले यस जानकारीको मूल्याङ्कन गर्दछ: यस उद्देश्यको लागि अधिकृत अदालत यस मिशनको प्रभारी छ। वर्षको अन्तिम समयले तपाईंलाई २०२२ मा पूरा गर्न चाहने व्यावसायिक लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो निर्णयहरू गर्न नेतृत्व गर्न सक्छ। ठिकै छ, विपक्षी तयारी गर्नु भनेको तपाईंले आफ्नो करियरमा विचार गर्न सक्ने विकल्पहरू मध्ये एक हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विपक्षहरू » विपक्षीहरु कस्ता छन् ?
चिकित्सा शिक्षा के हो?
पशु चिकित्सकको रूपमा काम गर्न के गर्नुपर्छ